Irana:Ampahan-tsarimihetsika maro nalain’olon-tsotra momba ny hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2009 11:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Swahili, Deutsch, Español, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, عربي, Português, English
Maherin'ny olona 100,000 no nirotsaka an-dalam-be tao Tehran tamin'ny Alatsinainy nanohana ilay reformista mpirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, Mir Hussein Mousavi sy ny fangatahany fanafoanana ireo voka-pifidianana nilazàna ny fandresen'ny Filoha am-perinasa Mahmoud Ahmadinejad tamin'ny fifidianana natao ny 12 Jona. Niafara tamin'ny rà mandriaka ny diabe. Raha kely indrindra dia olona 7 no namoy ny ainy.
Araka ny tatitra iray tao amin'ny Fahitalavitra Channel 4 Britanika, (afaka napariaka ihany na dia teo aza ny sàkana natao tamin'ny fitateram-baovao vahiny) dia nisy andian'olona nitora-bato sy nandoro trano iray an'ny milisy Basij mpomba ny governemanta. Milisy iray misatro-by no nanao tifi-danitra tamin'ny AK-47 teny aminy avy eny ambony tafo talohan'ny nihemorany nanoloana ny tora-bato variraraka. Ao amin'ny YouTube dia maro ireo sarimihetsika nalain'olon-tsotra mitantara ny fizotry ny fanafihana:
Ny maraina taorian'io tifitra io, ny mpiandraikitra ny tobim-pitsaboana Rasool Akram ao Tehran dia nanao hetsika fanehoan-kery ho fanoherana ireo vono-olona. Mpanao fanehoan-kery iray no manàndratra sora-baventy iray milaza hoe: “maritiora 8 ”
Na fitifirana na famoretana dia samy tsy nahasàkana ny hetsi-panoherana, ary dia an'arivony indray ireo nirotsaka an-dalam-be tao Tehran ny Talata. Mitombo ihany koa ny hetsika fanehoan-kery any amin'ireo tanàna hafa. Ao Shiraz, ireo mpanohitra asehon'ity sarimihetsika ity dia nandoro ny sarin'ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad.